Ciidamada AMISOM oo lagu qarxiyay Wadada warshadaha ee Muqdisho -News and information about Somalia
Home Warkii Ciidamada AMISOM oo lagu qarxiyay Wadada warshadaha ee Muqdisho
Ciidamada AMISOM oo lagu qarxiyay Wadada warshadaha ee Muqdisho
Kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa maanta qarax miino waxaa lagula eegtay wadada warshadaha ee Magaalada Muqdisho.
Qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhacay xaafada ceymiska gaar ahaan labaajada mahad alle ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.
Goobjoogayaal ayaa Warkii Online u sheegay in qarax miino ee loo dhigay ciidanka AMISOM uu haleelay mid ka mid ah gawaarida ay wateen oo marayay Xaafada Ceymiska ee degmada Yaaqshiid .
Ciidanka AMISOM ayaa furay rasaas, waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in rasaataasi ay ku dhinteen laba qof, halka tiro intaasi ka badana ay ku dhaawacmeen, rasaasta ay fureen ciidamada AMISOM.
Ciidamada AMIOSM ee qaraxa lala eegtay ayaa la sheegay inay ka yimaadeen degmada Balcad ee gobolka shabeellada dhexe.
Previous articleXiisad Saakay Ka Taagan Degmada Jalalaqsi Ee Gobolka Hiiraan
Next articleMadaxweyne Deni oo maanta ku wajahan Kismaayo
Kulankii Aqalka sare oo baaqday
Mareykanka oo lagu eedeeyay in ay ku guul dareysatay dagaalka Al-Shabaab.